Meksikoon godaansa ittisuuf jecha xiyyaara Preezidantii gurguruuf - BBC News Afaan Oromoo
Meksikoon godaansa ittisuuf jecha xiyyaara Preezidantii gurguruuf
Preezidantiin Meeksiikoo Andirees Loppeez Obraador xiyyaarasaanii gurguruun maallaqichaan godaansa ittisuuf yaaduusaanii ibsan.
Preezidantichi yaada kana kan fidan, waliigaltee biyyisaanii Meksiikoon US waliin irra geesseen wal qabateeti.
Waliigaltichaanis Meksikoon goodaansa biyyoota jiddugalaa Ameerikaarraa gara US tti taasifamu dhaabu yoo dandeesse, mootummaan Donaald Traamp ammoo uggura qaraxa omishaalee Meksiikoorra kaahee ture hambisa.
Preezidant Obraadoor duula na filadhaa wayita gaggeessaa turan xiyyaara preezidantiif ramadamu gurgureen hiyyeessa biyyattiin ittiin deeggara jechuun waadaa galanii turan.
Tiraamp karoora godaantota Meeksikoo tasa saaxilan
Daangaa US fi Meeksikoorratti qorichi seeraan alaa qabame
Xiyyaarri pirezidaantichaa 'Boeing 787 Dreamliner' ta'ees dolaara miiliyoona 150 akka baasu tilmaamama.
Preezidantiin gabaabaatti AMLO jedhamuu beekaman kun ttibba duula na filadhaatti, ergan xiyyaara kiyya gurguree booda ummata waliinan waldhiibaa adeemas jechuun waadaa galaniiru.
Xiyyaarri kun doolaara miiliyoona 218 bitame.
Xiyyaarri kun gurgurtaaf erga dhiyaatee ji'ootni kan lakkaawaman yoo ta'u, amma man-kuusaa Kaalifoorniyaa jiru keessa dhaabatee argama.
Meksikoon xiyyaara preezidantichaa dabalatee xiyyaaroota motummaa 60 fi hilikooptaroota 70 gurguruuf jirti.
Meksikoon biyyoota US daldalaan hidhata waliin qaabdu gurguddoo keessaa sadaffaa yoo taatu, waldhabdee Donaald Traamp waliin qabaachaa turteen walqabatee omishoota Meeksiikoodhaa dhufan irratti qaraxni olaanaan kaa'amee ture.
Meksikoon xiyyaara gurguruu bira darbuun poolisoota kuma jaha gara Gwatimaalaatti erguun goodaansa seeraan alaaa ittisuuf waadaa galte jirti.
Goodayyaa suuraa Godaantoota Meeksiskoo
Gurguramuun xiyyaara preezidantichaa kun lammiilee biyyatti hedduun kan fudhatame hinfakkaatu. Maallaqa kaffaltoota gibiraa Meksikoon xiyyaarrii bitame gurguramee goodaantota lammiilee biroof ooluun sirrii miti jechuun komatu.
Kanneen hafan ammoo xiyyaarichi baatiiwwan jahan dhufan keessa kan hin gurguramne yoo ta'e, guyyoota 45 dhufan keessatti wayita taarifni US ka'utti kan bitu akka argatu abdatama.
Daangaa US fi Meeksikoorratti dawaan dhoksaan oomishamaa ture hedduun qabame